vendredi, 28 octobre 2016 07:16
Soarano : Varavarana misokatra hataon’ny Madagascar Oil
Tanterahina anio zoma 28 oktobra eo amin’ny Café de la Gare Soarano ny varavarana misokatra karakarain’ny orinasa Madagascar Oil, izay mitrandraka ny solika mavesatra ao Tsimiroro. Fotoana io hahafantaran’ny mpitsidika bebe kokoa manodidina ny famokarana ao Tsimiroro, sy ny sehatra azo ampiasana ny solika mavesatra vokatra ao.
vendredi, 28 octobre 2016 06:33
Anosivavaka-Ambohimanarina : Hotokanana anio ny tobin’ny mpamonjy voina
Sampan’ny ao Tsaralalana izy ity, efa nisy ela fa nasiam-panavaozana ny foto-drafitrasa dia izao hotokanana izao.
vendredi, 28 octobre 2016 06:27
PMU : Filaharam-be teto Fianarantsoa
Nananika ny 3,3 miliara ny tontona tamin’ny hazakazan-tsoavalin'ny PMU omaly alakamisy 27 oktobra. Maro no nitsapa vintana sao mba mitsiky aminy, ka nilahatra nividy tapakila tamin’ireo toeram-pivarotana PMU teto Fianarantsoa.
vendredi, 28 octobre 2016 06:15
Fisorohana ny vohoka aloha loatra : Nanao fanentanana teto Mahajanga ny PSI Madagascar
Mitety faritra ny PSI manentana ny tanora hisoroka ny vohoka aloha loatra sy ny aretina azo avy amin’ny firaisana ara-nofo, ka anjaran’i Mahajanga omaly alakamisy 27 oktobra. Nisy koa ny fizarana kapaoty maimaimpoana ho an’ireo tanora. Haharitra roa andro ny hetsika.
vendredi, 28 octobre 2016 05:40
Tolagnaro : Trano telo levon’ny afo
Ny alarobia tamin'ny 8ora alina no nitrangan’ity haintrano ity tao Esokake. Labozia nirehitra nefa nilaozan’ny tovolahy iray, efa varimbarian’ny toaka, tao an-trano no nitarika ny loza. Ny Fokonolona no nifanome tanana namono ny afo, mandrampahatonga ny fiaran'ny mpamonjy voina. Trano telo no indray kilan’ny afo, niaraka tamin’ny entana sy ny tahirin-tsakafo tao anatiny. Tsy nisy kosa ny aina nafoy.
Page 320 sur 424